‘पहिलो प्राथमिकतामा कृषि, सिंचाइ र सडक’ - ‘पहिलो प्राथमिकतामा कृषि, सिंचाइ र सडक’ -
‘पहिलो प्राथमिकतामा कृषि, सिंचाइ र सडक’
शिवु खनाल ३ पुष २०७८, शनिबार अन्तर्वार्ता
स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वार्चित भएर आएको करिब पाँचवर्ष पुरा भएको छ । वितेको करिब तिनवर्ष यता कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आतंकित बनाएको छ । त्यतीमात्र नभइ अहिले उक्त भाइरसको नयाँ रुप (भेरियन्ट) ओमिक्रोन भाइरस नेपालमा पनि देखा पर्यो । । (कोभिड १९) को महामारीसंग जुद्दै स्थानिय तहका जनप्रनिधिहरुले विकासका कामलाई कसरी तिब्रता दिएका छन् । यो सबैको चासोको विषय बनेको छ । यही विषयमा आधारित रहेर दाङ देउखुरीबाट उज्यालो नेटवर्ककर्मी शिवु खनालले गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष गुलाम माेहम्मद जागा मुसलमानसंग गरिएको कुराकानी सारसंक्षेप :.
– हिजोआज के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
मेरो सधैको दिनचार्य उही हो । जनताको कामकाज गर्ने । जनताको गुनासोहरु आउँछ । उनिहरुको समस्याको समाधान गर्ने । वडा कार्यालयमा जनताहरुसंग विकासको योजना बारे छलफल गरिन्छ । वडलाबासीलाई मुस्कान सहितको सेवा प्रदानको लागी जनताकै काममा वडा कार्यालयमै अहोरत्र व्यवस्त हुन्छु ।
– वितेको पाँच वर्षको अन्तरालमा वडामा देखिने लायक यहाँले गरेको विकास केके छन्, भन्दिनुस्न ?
म स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएदेखि गढवा गाउँपालिकामा थुप्रै कामहरु सम्पन्न भएका छन् । यो करिब पाँचवर्षको दौडानमा जस्तै भौतिक पूर्वधार अन्तरगत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, यातायात, सिँचाइ, लगायतका थुप्रै कामहरु सम्पन्न भएका छन् । मलाई लाग्छ चुनावमा जनतासंग मैदानी क्षेत्रमा गरिएका प्रतिवद्धताहरु सबै पुरा गरेको छु ।
– शिक्षा क्षेत्रमा ?
मेरो वडामा दुईवटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । होमजुम विद्यालयमा पर्खाल थिएन, वडाको चारलाख तीस हजार बजेटबाट विद्यालयमा पर्खाल निर्माण गरिएको छ । यस्तै सोही विद्यालयमा गणित विषयको शिक्षक नहुदा विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा समस्या थियो । वडाबाट तलबको व्यवस्थापन गरेर गणित विषयको शिक्षक राखिएको छ । दुईवटा विद्यालयका जस्को आर्थिक स्थिति कमजोर छ, ती विद्यार्थीको मासिक शुल्क व्यक्तिगत खर्चबाट व्यवस्थापन गर्दै आएको कुरा यहाँलाई म बताउन चाहान्छु । त्यती मात्रै नभएर पर्सेनिमा रहेको फैजानि रजा अहिले सुन्नत मद्रसामा पटकपटक गरि वडाबाट चारलाख बजेटबाट मर्मत गरि संचालन ल्याइएको छ ।
दुई विद्यालयले विद्यार्थीको नाम छनोट गरेर वडा कार्यालयमा पठाएको आधारका निम्न एवम् सिमान्कृत समुदायको केटाकेटीलाई निशुल्क ड्रेस वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । दिपेन्द्र होमजुम विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई निशुल्क झोला वितरण गरिएको छ । चार नम्बर वडाबासी तर अन्य वडाका विद्यालयमा अध्ययनरत गर्दै आइरहेका विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क ड्रेस वितरण गरिएको छ । यस्तै खड्कपुर मद्रसा तारबारको लागि दुई लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । हामी निर्वाचित भएर वडामा आइसकेपछि शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखिय काम गरेको जस्तो लाग्छ है । जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि विद्यालयहरुमा भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण भैसकेको छ । यसैगरी अव हामी शिक्षा क्षेत्रमा अझै दिर्घकाली योजना बनाएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ ।
– स्वास्थ्य क्षेत्रमा ?
मानिसको जिवनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेकै स्वास्थ्य क्षेत्र हो । तर हाम्रो वडामा एउटा सिटामोल किन्न गढवा पुग्नुपर्ने बाध्यत थियो । अहिले उक्त समस्या समाधान गरिएको छ । वडामा गतिलो स्वास्थ्य चौकि थिएन । उपचारको लागि गढवा, लमही जानुपर्ने बाध्यता थियोे । अहिले वडामा कालिका विद्यालयको छेवैमा संसद विकाष कोष र वडाको बजेटबाट स्वास्थ्य चौकि निर्माण गरि संचालन आएको छ ।
अहिले उक्त स्वास्थ्य चौकीबाट वडाबासीहरुले राम्रो सेवा लिदै आउनु भएको छ । वडामा रहेको स्वास्थ्य चौकीबाट दिनमा ४० देखि ५० जना विरामीले सेवा लिदै आउनु भएको छ । यसभन्दा पहिले सामान्य उपचारको लागी लमही घोराही जानुपर्ने बाध्यता थियो ।
यस्तै वडा क्षेत्रभित्र रहेका आँखाका विरामी जेष्ठ नागरिकहरुलाई पहिचान गरेर उनिहरुको निःशुल्क आँखा स्वास्थ्य चेकजाँच गरि निःशुल्क अप्रेसन समेत गरेका छाँै । वडामा अहिलेसम्म दुई पटक निःशुल्क आँखा स्वास्थ्य शिविर संचालन गरि चारसय जना जेष्ठ नागरिकहरूको आँखा उपचार गर्नुका साथै, निःशुल्क अप्रेसन समेत गरिएको छ । जस्ले गर्दा बुढेसकालमा जेष्ठ नागरिकहरुले नयाँ ज्योती प्राप्त गरेका छन् ।
त्यतीमात्र नभइ वडाका केहि अपांगलाई ह्लि चियर, छाता, झुल भिटामिन निःशुल्क वितरण गर्नुका साथै (कोभिड १९) को बेला वडाका प्रत्येक घर—घरमा पुगेर स्वास्थ्य सामाग्री अन्र्तगत मास्क, सेनिटाइजर लगायतका अन्य स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गरिनुका साथै वडामा कोभिड बाट बच्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । वडाका नागरिकलाई एउटा सामान्य प्रेसर नाप्नुपर्ने, बच्च तौल गर्नुपर्ने लगाएत विविधका सेवाहरु लिन धेर्रै असहज थियो तर हामी निर्वार्चित भएर स्थानिय तहमा आईसकेपछि शान्त वातावरणमा सहज रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाउनुपर्ने स्थानिय नागरिकहरुले स्वास्थ्य सेवा लिइराख्नु भएको छ । हामी आइसकेपछि पहिलेको तुलनामा त अहिले धेरै राम्रो स्वास्थ्य सेवाहरु उपलब्ध गराएका छौँ हामीले ।
– खानेपानी क्षेत्रमा ?
गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा पहिलो काम सम्पन्न भएकै खानेपानी हो । हामी वडामा आउनु भन्दा पहिले वडामा खानेपानीको समस्या थियो । म निर्वाचित भएर आएपछि वडाबाट माग गरेर पहिलो चरणमा वडाको मग्रौटा गाउँ खानेपानीको ओभरहेड टंकी बनाएर खानेपानीको प्रणालीलाई अगाडि बढाइ रहेका छौँ र संचालन गरिएको छ ।
अझ भन्नु हुन्छ भने केही एकदुई वटा टोलले त खानेपानी खाइसक्यो । म चुनावमा उठ्ने बेलामा पनि मेरो नामा भनेकै एक घर एक धारा हो । मेरो घोषणपत्रमा त्यो नारा उल्लेख छ । त्यस अनुसार अहिले वडाका अन्य टोलहरुमा पनि खानेपानीको कामलाई अगाडि सारेको छु ।
कमसेकम प्रत्येक घरकार जनतालाई शुद्ध खानेपानी खुवाउन पाइयो भने मेरो चुनावी नारा अभियान पनि पुरा हुने र जनताले पनि शुद्ध खानेपानी खान पाउने भए । त्यसका लागी हामी प्रत्येक टोलमा डिप बोर्रिङ् र खानेपानीको ओभरहेड टंकी बनाएर खानेपानीको प्रणालीलाई अगाडि बढाइ रहेका छाँै । यसका लागी संघिय र प्रदेश सरकारबाट आवश्यकता अनुसार बजेटहरु माग गर्ने र हाम्रो पालिकाबाट बजेट पनि हालेकै छौँ । वडाका प्रत्येक घर—घरमा हेनपाइप वितरण गरिएको छ । थप वडाबाट माग गरेर जिल्ला खानेपानीबाट बजेट विनियोजन गरि वडामा खानेपानीको टंकी निर्माण गर्ने योजनामा रहेको छु ।
– विद्युत् क्षेत्रमा ?
गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो, जुन विद्युत् विस्तार भएतापनि आउने भोल्टेजहरु अत्याधिक कम हुने । होटलका फ्रिज नचल्ने, पंखा नचल्ने, बत्ती पनि डिम बल्ने, मोटरहरु नचल्दिने समस्याहरु धेरै थिए त्यसका लागी थ्रिपेच लाइनको विस्तार गर्ने र ट्रान्र्फमको क्षमता बढाउने भनेर सुरुवाती वर्षदेखि विद्युत् विस्तार गर्ने, त्यसपछि भोल्टेच बढाउनको लागी थप क्षमता भएका ट्रान्र्फमहरु राखिएको छ ।
जस्ले गर्दा अहिले चाहि विद्युत्को समस्या वडामा छैन । २०७४ सालमा निर्वाचित भएर आएदेखि खड्कपुर गाउँमा ५० भोल्टेजको ट्रान्सर्फमर जडान, नयाँ बस्तीमा एकसय ११ घरधुरी संख्या अन्धकार थियोे । तार पोल विस्तार गरेर ट्रान्सर्फमर जडान गरि गाउँ उज्यालो बनाउने अभियान सम्पन्न भएको छ । बड्का पर्सेनिको चोकमा डिम बत्ती बल्ने समस्या थियोे । उक्त स्थानमा ५० भोल्टेजमो ट्रान्सर्फमर जडान गरि समस्या समाधान गरिएको छ ।
यस्तै हडैया चोकमा उहीँ समस्या थियोे । त्यहाँ पनि छुट्टै ५० भोल्टेजको ट्रान्सर्फमर जडान गरि समस्या समाधान गरिएको छ । त्यतीमात्र नभएर बत्ती नपुगेको प्रत्येक गाउँमा टोलमा तार पोल विस्तार गरेर बत्ती बाल्ने काम भएको छ । वडामा कहिकतै अन्धकार छैन । अहिले पनि वडाबाट चारलाख बजेट छुट्याइएको छ । विद्युत् नपुगेको टोलमा तत्कालै पु¥याउने अभियानमा छु ।
– कृषि, सिंचाइ क्षेत्रमा ?
साच्चै भन्ने हो भने गढवा गाउँपालिका अन्र्तगत वडा नम्बर ४ का स्थानीयहरुले वडामा सिंचाइको सुविधा नहुँदा सबैभन्दा बढि सास्ती खेप्दै आइरहेका थिए । वडामा सिचाइको सुविधा नहुदा बीउ राख्ने स्थिति थिएन ।
म आफै किसानको छोरा पनि हुँ । त्यसकारण कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर विभिन्न काम गरेको । चारवर्षको अवधिमा करिब ८० लाख बजेट विनियोजन गरि, सिचाइको लागि निःशुल्क मोटर वितरण, कटियान गाउँ र खड्कपुरमा पक्की नाला निर्माण, पानी नलाग्ने ठाउँमा सिचाइको लागि निःशुल्क बोर्डिङ् र मोटर वितरण गरिएको छ ।
यस वडामा ९० प्रतिशत किसानहरु कृषि पेशामा आवद्ध हुनुहुन्छ । यहाँबाट उत्पादन भएको तरकारीहरू स्थानीय बजारमा राम्रो खपत भएको छ । जसले गर्दा किसानले राम्रोसंग जिविका चलाएका छन् । यस वडाको मुख्य आय स्रोत भनेकै कृषि पेशा हो । वडामा रेशम खेति गर्ने किसानहरू पनि रहनु भएको छ । किसानको माग आएपछि रेशम खेतिको लागि निःशुल्क मोटर र बोर्डिङ उपलब्ध गराएको छु ।
– यातायात क्षेत्रमा ?
यातायात क्षेत्रमा भन्ने हो भने, विकासको मुल पूर्वाधार अथवा मेरुडण्डै यातायातलाई मान्नुपर्छ बास्तमा । जहाँ यातायताको पहुँच हुदैन, जहाँ सडक बाटाघाछटा पुग्दैन त्यहाँ विकासको परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन । यसको लागी गढवा गाउँपालिकाले पनि आफ्नै किसिमको अपधारण बनाएर आइरहेको छ भने हामी वडाले पनि कुल टोलमा कसरी बाटोको पहुँच विस्तार गर्ने भने प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोज गर्दे आएका छौँ ।
अहिले वडामा धेरै बाटाघाटा नभएका धेरै टोलहरुमा नयाँ ट्र¥याक खुलेका छन् । कतै कालोपत्रे भएका छन् भने कतै ग्रेभेल गरिएको छ । उठैया देखि खड्कपुर जोड्ने साढे तीन किलोमिटर सडक कालोपत्रेको काम सम्पन्न भएको छ । हामीले वडामा रिङरोडको अवधारणा अनुसार सडक निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम तिब्र गतिमा बढाएका छौँ ।
स्थानीय केटाकेटीलाई विद्यालय जानको लागि मग्रौटा बुटेहेनि गाउँ जोड्ने हढैया खोलामा पक्कि नाला र कल्भट निर्माण गरि पानी एकतिर लगाएर दशमिटरको नयाँ बाटो निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ । यस्तै पर्सेनि पुजाल्ने घरदेखि रामपालु चौधरीको घरसम्म माटो फिलिङ् गरेर ग्रेभेल गरि नयाँ बाटो निर्माण, सोहि गाउँमा नाला सहितको बड्का पर्सेनिदेखि अगाडि नयाँ बाटो निर्माण कार्य विस्तार, पर्सा गाउँमा ग्रेभेल सहित पक्कि नाला निर्माण, कालिका मन्दिरदेखि खैराखालको पिचबाटोमा जोड्ने गरि जनताको सहयोगमा नयाँ बाटो निर्माण, स्थानीय जाविर अलिको घरदेखि पुजाल्नीको घरसम्म जोड्ने नयाँ निर्माण, पर्सादेखि खड्कपुरसम्म पक्कि नाला सहितको नयाँ बाटो निर्माण, खड्कपुर महजितदेखि दंगाली कुलोसम्म वडाको ८ लाखको बजेटमा माटो फिलिङ् बाटो ग्रेभेल ठेक्का प्रक्रियामा रहेको छ भने उठैयादेखि अगजगढवा खड्काको घरसम्म पक्कि नाला सहितको बाटो ग्रेभल सम्पन्न भएको छ ।
यस्तै चेतनाथ योगिको घरदेखि भुर्यमियाको घरसम्म माटो फिलिङ् देखि बाटो ग्रेभेलको काम, बड्का पर्सेनिको चोकदेखि कटियान गाउँसम्म दुईतर्फ पक्कि नाला सहित बाटो ग्रेभेलको काम संचालन भइरहेको छ । परसपुर विष्णु कुमालको घरदेखि वडा कार्यालयको दामोदरबाटोमा जोड्ने गरि पक्कि नाला सहित माटो फिलिङ् गरि बाटो ग्रेभेल निर्माण कार्य जारी रहेको छ ।
लखन चौधरीको घरदेखि अन्तुराम चौधरीको घरसम्म नयाँ बाटो निर्माण कार्य गतवर्ष सम्पन्न भइ संचालनमा आएको र सुतैयादेखि कटियान गाउँ जोड्ने बाटोमा कल्भट सहितको माटो फिलिङ् गरि बाटो ग्रेभल, भुसुकपुरूवा बेचन यादवको घरदेखि खानेपानीको टंकी सम्म नयाँ बाटो निर्माण कार्य सुरु भएको छ भने स्थानीय सुशील नेपालीको घरदेखि सा.व भवनसम्म माटो फिलिङ् गरि बाटो ग्रेभेल निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
जसको लागि वडाबाट बजेट विनियोजन भइसकेको छ । यस्तै स्थानीय निमबहादुर खड्काको घरदेखि भगवता बोटेको घरसम्म माटो फिलिङ गरि बाटो निर्माण कार्य सम्पन्न, टुकमानको घरदेखि उत्तर धनिरामको घरसम्म पक्कि नाला सहितको बाटो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै वडाका विभिन्न बस्ती गाउँ जोड्न नमुना कल्भट निर्माण गरिएको छ ।
– जनताको आधारभुत आवश्यकतालाई यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ ?
यहाँले निकै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँ नीर । हामी निम्न स्तरका गरिबिको रेखामुनी रहेका नागरिक हौँ । यसमा पनि पेशाले कृषिमा अवद्ध छाँै । अझ ४ नम्बर वडामा ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गहरु छन् ।
त्यसकारण उनिहरुको आधारभुत आवश्यकता भनेको खास, बास र कपासकै कुरा हो, त्यैसले मेरो आफ्नो भिजन के हो भने उनिहरुको जिवन समृद्धिको लागी भने आर्थिक कृयाकलापहरु लागु हुन सकने कार्यक्रमहरु तय गर्नुपर्छ । जिवीकोपार्जनमा उहाँहरुलाई संलग्न गराउनुका साथै अनुदानका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । स्थानिय स्तरमा भएका स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर उहाँहरुको क्षमताको आधारमा उहाँहरुलाई अर्थउपार्जन गरेर भौतीक आवश्यकतालाई पूर्ती गर्ने लक्ष्य रहेको छ । वडा क्षेत्रका महिलाहरुलाई उद्यमी बनाउनको लागी सिलाइ मेशिन वितरण गरिएको छ । वडा अन्र्तगतका एकल महिला, गरिब, विपन्न स्थिति भएका करिब एकसयजना महिलालाई सिलाई कटाइका सम्पूर्ण सामाग्री निःशुल्क वडाबाट वितरण गरिएको छ ।
– निर्वार्चित भएर स्थानिय तहमा आइसकेपछि काम गर्ने क्रममा चुनौती आएकी आएनन्, बताइदिनुस्न ?
यो पन निकै महत्वपूर्ण प्रश्न गनु भयो यहाँले । हामी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर स्थानिय तहमा आइसकेपछि विकासका कामलाई तिब्रता दियौँ । विकासको क्रममा विनाश अवश्य हुन्छ । सोही क्रममा विकास गर्दा विरोधका स्वरहरु धेरै आए तर विरोध गर्ने प्रतिपक्षले नै हो । उनिहरुले राम्रो काम गरेको देख्न सक्दैनन् । मेरो अहिले सम्मको कार्यकालमा विकास गर्ने क्रममा विरोधका स्वरहरु जती पनि आवाजहरु आए ति, आवाजलाई चिरेर विकास गर्न तर्फलागे । विकास गर्ने क्रममा विरोध आउने सोभाविक हो । विरोध आयो भन्दैमा विकास रोक्ने होइन । एकदुईजना त्यस्ता हुन्छन् । आत्तिनु पर्दैन । त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्छ मेरो विचारमा ।
– अन्तमा केही छुट्यो की ?
सर्वप्रथम यहाँ र उज्यालो नेटवर्क अनलाईन पत्रिका परिवारलाई विशेष धकन्यवाद दिन चाहान्छु । दाङको गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का अहिलेसम्मका सम्पूर्ण गतिविधिहरु सञ्चारमाध्यमबाट आम स्थानियहरुको माझमा पु¥याइदिनु भएकोमा । अन्य दिनहरुमा पनि यहाँहरुको साथ, सहयोग र सहकार्य यसरीनै रहनेछ भन्ने अपेक्षा समेत गरेको छु ।
शिवु खनाल उज्यालो नेटवर्कका दाङ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ ।
अन्तर्वार्ता- समृद्ध भरतपुर नै मेरो सपना : महानगरपालिका
अन्तर्वार्तामा लालध्वज भन्छन्, ‘गठबन्धन माओवादीका लागि मात्रै चाहिएको
विद्यालयलाई नमूना बनाउने योजना छ : केशवराम यादव,प्रधानध्यापक,